भाषाको दुर्दशा - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
‘भोलि संग्रहालय लान्छु तिमीहरुलाई, सबैले होममेड टिफिन बोकेर ल्याओ हैै’ बोर्डिङ स्कुलका एक शिक्षकले भोलिको छाउनी संग्रहालय भ्रमण बारे प्रकाश पार्दै विद्यार्थीहरुलाई भने । उनीहरुले होममेड टिफिनका बारेमा प्रस्टै बुझे । तर, संग्रहालय शब्द सुनेपछि भने निकै घोरिए । त्यहाँ गुरुले संग्रहालयका सट्टा ‘म्युजियम’ शब्द प्रयोग गरेका भए सबैले नाककै चालले बुझ्ने थिए ।
सुन्दा सन्दर्भ सामान्य लागे पनि यसमा ठूलै समस्या जोडिएको छ । एक व्यक्तिमा रहेको विचार अर्कासम्म पु¥याउने माध्यम हो भाषा । भाषाले व्यक्ति व्यक्ति, समाज र सिंगो राष्ट्रलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने काम गर्दछ । अघि माथि भनिएको घटनाबाट हाम्रो भाषिक व्यवहार कतातिर उन्मुख छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । भाषा हाम्रो मौलिकता हो । नेपाली भाषामा गाउँले जनस्ततरदेखि हुर्किंदै आएका लेक बेँसी, पाखा पखेरामा सहजताका साथ बोलिँदै आएका आफ्नै विशेषताले भरिएका शब्दहरु प्रयोग हुँदै आएका छन् । यी शब्दको प्रयोग जति गर्न सक्यो त्यति हाम्रो भाषा जीवन्त र मौलिक बन्छ ।
परिणामतः नजानिँदो पारामा अंग्रजी भाषाले प्रभाव जमाउँदै छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा दौडिरहेको वर्तमान परिवेशमा विदेशी भाषाको प्रयोग कति ठिक भन्ने प्रश्न आफैँमा विमर्शको विषय बन्न सक्ला । तर, सन्दर्भ त्यो नभएर हामीले आफ्नो भाषाका मौलिक शब्दलाई प्रयोग गर्न छाडेर अन्य भाषालाई कति मात्रामा प्रश्रय दिने भन्ने हो । आजभोलि हजुरआमा शब्द आमा र आमा चाहिँ ममीमा सीमित रहन गएको छ । त्यस्तै बुबालाई बाबा अथवा ड्याडी अनि हजुरबुबालाई बुबामा खुम्च्याएर प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।
शब्दको आफ्नै सांस्कृतिक—पारम्परिक मान्यता र प्रयोजनपरक अर्थ हुन्छ । वक्ताले यस विषयमा ध्यान दिन नसक्दा आज शाब्दिक गरिमा भत्किँदै जाँदो छ ।
परीक्षामा विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण आफ्नो नातिलाई कसैले तपाईँको नाति विशिष्ट उत्तीर्ण भएछ भन्दा पनि ‘हँ, बर्बादै भो नि’ भन्दै अनुत्तीर्ण भएको अर्थ लगाएर हजुरबा÷हजुरआमा निराश हुनसक्ने अवस्था छ । बाजे पुस्तामै यसको प्रभाव देखिएन त अब ! उनलाई ‘नाति पास भएछ’ भनेको भए उनको ओठमा जुन खुसी सञ्चरित हुन्थ्यो, त्यो स्थिति त्यहाँ प्रकट हुन गाह्रो पर्दछ । सजायका सट्टा पनिस्मेन्ट, प्रार्थना सभाका सट्टा मोर्निङ एसेम्ली, वनभोजका सट्टा पिकनिक, गृहकार्यका सट्टा होमवर्क जस्ता शब्द अहिले स्कुले विद्यार्थीमा अत्यन्त सहज रुपमा प्रयोग हुने शब्द हुन् । उनीहरू देवनागरी लिपिमै अंग्रजी शब्द लेख्न बेर लाउँदैनन् ।
विद्यार्थीले नेपाली शब्दलाई लत्याएर अंग्रजी बोल्न खोज्दा न अंग्रजी मै पोख्त हुन सकेका छन् न त आफ्नो भाषा मै । अहिले विद्यार्थीहरुले मुख्यतया हाम्रा गाउँघरमा प्रयोग गरिने ढिकी जाँतो, आँगन टाट्नो, चुलेसी ठेकी मदानी, जस्ता शब्दका अर्थ थाहै पाएका छैनन् । जान्दै नजानेका शब्दलाई प्रयोगमा ल्याउने प्रश्नै आएन । यी मौलिक शब्दहरु प्रयोग नगर्दा हाम्रो भाषाको शब्दभण्डार नै कमजोर बन्न सक्छ ।
आजभोलि पत्रपत्रिका, सिनेमा, पुस्तक, शैक्षिक संस्था, ठुल्ठुला सपिङ मल लगायत धेरेजसो संस्थाको नामकरणमा हाम्रा मौलिक शब्दहरुलाई स्थान दिइएको पाइँदैन । सबैमा कुनै न कुनै रुपमा अंग्रजी शब्दको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको पाइन्छ । नेपाली भाषामा यत्रात्रिधि सार्थक, मौलिक शब्द हुँदा हुँदै किन अर्काको पछि लाग्ने ? अहिले खड्किएको विषय यही हो ।
भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति हाम्रा अमूल्य निधि हुन् । हामीसँग गर्व गर्न लायक सांस्कृतिक एवं प्राचीन महत्त्वका पुर्खाका निसानीहरु छन् । हाम्रो पहिचान भन्नु नै त्यही होे । नेपाली मलिलो धरातलमा हाम्रो सभ्यतासँगै हुर्किँदै आएका यी सम्पदाको संरक्षण गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो । यतातिर पनि एक पटक ध्यान दिने कि ?